Siyaasadda gaarka ah - NYE Countdown for Djs, Vjs, Nightclubs 2019
Sida shabakadaha intooda badan, NYECountdown, llc, ("NYECOUNTDOWN, LLC"), waxay ururiyaan macluumaadka aan shakhsiga ahayn ee aqoonsiga nooca ah ee shabakadaha internetka iyo server-yada sida caadiga ah u sameystaan, sida nooca browserka, doorbidka luuqadda, goobta loo diro, iyo taariikhda iyo waqtiga codsiyada booqdaha. Ujeedada NYECOUNTDOWN, LLC ujeedada ururinta macluumaadka aan shakhsiga ahayn ee aqoonsiga waa inay si fiican u fahmaan sida NYECOUNTDOWN, LLC ee booqdayaashooda u isticmaalaan boggooda. Waqti-mar, NYECOUNTDOWN, LLC ayaa laga yaabaa inay siidayso macluumaadka aan shakhsiyadeed ee shakhsiyadeed ee wadarta, tusaale ahaan, iyagoo daabacaya warbixinta isbeddelka isticmaalka boggeeda. NYECOUNTDOWN, LLC waxay sidoo kale ururineysaa macluumaadka shakhsiyadeed ee aqoonsi ahaan sida Internet Protocol (IP) cinwaanka loogu talagalay dadka isticmaala iyo kuwa isticmaala iyaga oo ka tagaya comments on blog.com. NYECOUNTDOWN, LLC oo kaliya ayaa sheegaysa cinwaanada IP-ga iyo faallooyinka IP-da iyada oo la eegayo xaalado isku mid ah oo ay isticmaasho oo shaaca ka qaadaan macluumaadka shakhsiyeed-aqoonsiga sida hoos lagu faahfaahiyay, marka laga reebo in faallooyinka blogka IP-yada iyo cinwaanada emailka la arki karo loona bandhigo maamulayaasha blog-ka faallo ayaa laga tagay.
Dadka booqanaya qaarkood ee NYECOUNTDOWN, LLC-yada waxay kala doortaan NYECOUNTDOWN, LLC siyaabo u baahan NYECOUNTDOWN, LLC si ay u soo ururiyaan macluumaadka shakhsiyeed-aqoonsi. Qadarka iyo nooca macluumaadka ee NYECOUNTDOWN, LLC ururiyaa waxay ku xiran tahay nooca isdhexgalka. Shakhsiyaadka ama hay'adaha waxaa laga yaabaa inay awood u yeeshaan in ay sameeyaan heshiisyo la leh NYECOUNTDOWN, LLC waxaa la weydiistaa inay bixiyaan macluumaad dheeri ah, oo ay ku jiraan sida loo baahan yahay macluumaadka shakhsi ahaaneed iyo kuwa maaliyadeed ee looga baahan yahay inay ka baaraandegaan macaamiilyadaas. Xaalad kasta, NYECOUNTDOWN, LLC waxay ururisaa macluumaadka noocaas ah oo keliya sida ay lagama maarmaan u tahay ama u habboon tahay in la fuliyo ujeeddada kaqaybgalka booqashada ee NYECOUNTDOWN, LLC. NYECOUNTDOWN, LLC ma sheegin macluumaadka shakhsiyadeed ee aqoonsiga aan ahayn sida lagu sharxay hoos. Kuwa soo booqanaya mar waliba way diidi karaan inay bixiyaan macluumaadka shakhsiyadeed-aqoonsiga, oo ay ku xiran tahay inay ka hortagi karto inay ka qaybgalaan hawlaha internetka la xiriira. Iyadoo la tixraacayo baaxadda caalamiga ah ee bogagga internetka, macluumaadka shakhsiyeed waxaa laga yaabaa inay muuqdaan dadka ka baxsan dalkaaga hooyo, oo ay ku jiraan dadka ku nool waddamada in sharciyada gaarka ah ee dalkaaga iyo qawaaniintuba aysan u qalmin in lagu hubiyo heer ku filan oo ilaalin ah macluumaadkan. Haddii aadan hubin haddii Siyaasaddan Qarsoodiga ahi ay ka hor imanayso sharciyada degaanka ee jira, waa inaadan gudbin macluumaadkaaga. Haddii aad ku nooshahay Midowga Yurub, waa inaad ogaataa in macluumaadkaaga loo gudbin doono Mareykanka, kaas oo loo arko in Midowga Yurub uu leeyahay ilaalin xog la'aan ah. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo la raacayo shuruucda maxalliga ah ee hirgelinta Xeerka Midawga Yurub 95 / 46 / EC of 24 Oktoobar 1995 ("Diritaanka Khaaska ah ee Midowga Yurub") ee ku saabsan ilaalinta shakhsiyaadka ee la xariira ka shaqeynta xogta shakhsiga ah iyo dhaqdhaqaaqa xorta ah ee macluumaadka noocaas ah, shakhsiyaadka oo ku yaalla waddamo ka baxsan Maraykanka dibaddiisa oo soo gudbiya macluumaadka shakhsiyadeed, sidaas awgeedna waxay ogolaanayaan isticmaalka guud ee macluumaadka noocaan ah ee lagu bixiyay Siyaasadda Khaaska ah iyo u wareejinta iyo / ama kaydinta Maraykanka.
Macaamiisha waxaa lagu dhiirigelinayaa, laakiin aan loo baahnayn, inay galaan macluumaadka ku saabsan naftooda, kuwaas oo lagu soo bandhigi karo xisaabtooda. Hadda, waxaan kaliya ku soo bandhigi doonaa shabakadayada macaamiisha, "Nickname" iyo magaalada aad ku taal. Haddii aadan rabin inaad hesho macluumaadka goobtaada la soo bandhigay, ha galin markaad buuxiso foomka macluumaadka rukumashada.
NYECOUNTDOWN, LLC waxaa ka go'an ilaalinta qarsoodiga carruurta, gaar ahaan kuwa ka hooseeya 13. Sida NYECOUNTDOWN, LLC wuxuu ku dhiirigeliyaa waalidiinta iyo masuulka inay si firfircoon uga qayb qaataan barashada internetka ee caruurta iyo caruurta. NYECOUNTDOWN, LLC ma si ula kac ah u soo uruurinayso macluumaadka dhalaanka. Intaa waxaa dheer, NYECOUNTDOWN, LLC ma bartilmaameedkeedu ubadkeedu yahay carruur.
• waxay ubaahan tahay in ay ogaato macluumaadkaas si ay uga baaraandegaan NYECOUNTDOWN, LLC ama inay bixiso adeegyo laga heli karo NYECOUNTDOWN, LLC-da, iyo
• kuwaas oo ku heshiiyey inaanan u sheegin dadka kale.
Qaar ka mid ah shaqaalahaan, qandaraaslayaasha iyo ururrada la xiray ayaa laga yaabaa inay ku yaalaan meel ka baxsan wadankaagii hooyo; adoo isticmaalaya websaytka NYECOUNTDOWN, LLC, waxaad ogolaaneysaa wareejinta macluumaadka noocaas ah iyaga. NYECOUNTDOWN, LLC ma kireeyn doonto ama iibin doonto macluumaadka shakhsiyan-aqoonsi ahaan iyo shakhsiyan-aqoonsiga cid kasta. Marka laga reebo shaqaalaheeda, qandaraaslayaasha iyo ururrada la xariira, sida kor lagu sharaxay, NYECOUNTDOWN, LLC waxay shaaca ka qaadeysaa macluumaadka shakhsi ahaaneed ee aqoonsashada iyo shakhsi ahaan aqoonsashada oo kaliya marka laga jawaabayo amar maxkamadeed, amar maxkamadeed ama codsi dawladeed kale, ama marka NYECOUNTDOWN, LLC aaminsan yahay iimaanka in shaacinta ay tahay mid macquul ah si loo ilaaliyo hantida ama xuquuqda NYECOUNTDOWN, LLC, dhinacyada saddexaad ama dadwaynaha oo dhan. Haddii aad tahay qof diiwaan gashan oo ka tirsan NYECOUNTDOWN, LLC websaydhadana bixisay cinwaanka emailkaaga, NYECOUNTDOWN, LLC ayaa mararka qaar kuugu soo diri doona email si ay kuu kuu sheegaan waxyaabaha cusub, adigoo raali ka noqda jawaab celinta, ama kugula socodsiiya waxa socda oo leh NYECOUNTDOWN, LLC iyo alaabooyinkeena. Waxaan inta badan isticmaali karnaa badeecooyinka wax soo saarka ee kala duwan si aan ugu gudbino macluumaadka noocan ah, sidaa darteed waxaan rajeyneynaa inaan ku hayno noocaan emailka ah ugu yaraan. Haddii aad noo soo dirto codsi (tusaale ahaan adoo adeegsanaya email taageero ama mid ka mid ah hababka jawaab celinta), waxaanu xaq u leenahay inaanu daabacno si aanu nooga caawino inaanu caddayno ama ka jawaabno codsigaaga ama naga caawiyo inaan taageerno dadka kale. NYECOUNTDOWN, LLC waxay qaadataa dhammaan tallaabooyinka si macquul ah lagama maarmaanka u ah in laga ilaaliyo helitaanka aan la oggolayn, isticmaalka, isbeddelka ama burburinta shakhsiyan aqoonsi ahaan iyo aqoonsi shakhsi ahaaneed.
Macmiilku waa xayeysiis macluumaad ah in website uu ku duubo kombuyuutarka booqdaha, iyo in browserka booqdaha uu siiyaa websaydii mar walba soo booqdaha. NYECOUNTDOWN, LLC waxay isticmaashaa cookies si ay u caawiso NYECOUNTDOWN, LLC qeexaan oo la socoshada booqdayaasha, isticmaalka shabakada NYECOUNTDOWN, LLC, iyo boggooda internetka. NYECOUNTDOWN, LLC dadka aan rabin in ay ku karsan yihiin kombiyuutarkooda waa inay dejiyaan dookhooda si ay u diidaan cookies kahor intaan la isticmaalin shabakadaha NYECOUNTDOWN, LLC, oo leh qulqulka qaar ka mid ah sifooyinka qaarkood ee NYECOUNTDOWN, website-ka LLC-yadu si fiican uma shaqeyn karaan iyada oo aan loo adeegsan karin cookies. NYECOUNTDOWN, LLC waxay noqon doontaa sharaf la'aan mana dalban doonaan codsiyada.
Mararka qaar, NYECOUNTDOWN, LLC ayaa kuu soo diri kartaa wargeysyada elektarooniga ah, ogeysiisyo, qoraalo (sms) sahan ama macluumaad kale, ama haddii kale ay kula xiriiraan adiga oo adeegsanaya habsocodsi toos ah. Haddii aad doorbideyso inaadan helin mid ama dhammaan fariimahan, waxaad ku dallaci kartaa adigoo raacaya tilmaamaha lagu bixiyey wargeysyada elektarooniga ah iyo ogeysiisyada, ama emailka support@nyecountdown.com oo muujinaysa rabitaankaaga inaad ka saarto liistada ama macluumaadkaaga laga saaro Adeegyada NYECOUNTDOWN, LLC. Qoraalka (sms) isdhaafka, kaliya ku jawaab "REMOVE".
Inkastoo isbeddelada badankood ay u badanyihiin kuwo yaryar, NYECOUNTDOWN, LLC ayaa laga yaabaa inay bedesho Siyaasadeeda Khaaska ah waqti ka waqti, iyo NYECOUNTDOWN, LLC kaligeed. NYECOUNTDOWN, LLC wuxuu ku dhiirigeliyaa dadka soo booqda inay si joogta ah u eegaan boggan wixii isbeddel ah ee Siyaasadeeda Khaaska ah. Isticmaalidaada sii socota ee boggan ka dib isbedel kasta ee Siyaasaddaan Khaaska ah waxay noqon doontaa aqbalaaddaada isbedelkaas.
Nidaamkan gaarka ah ee qarsoodiga ah waxaa lagu xakamaynayaa isku mid ka mid ah shuruudaha iyo xaddidaadda masuuliyadda sida laga helay NYECOUNTDOWN, Shuruudaha Isticmaalka ee Sharciga ee LLC sida ay ku habboon yihiin iyo sida ku cad sharcigu.
Nidaamkan gaarka ah ee qarsoodiga ah waxaa xukuma isla xeerka xukunka iyo goobta la yareeyey sida ku qoran NYECOUNTDOWN, Shuruudaha Isticmaalka ee Sharciga ee LLC sida ku qoran shuruudahaas lagu dabakhi karo iyo sida u sharciyeysan sharciga.